Xiisadda beelaha ee Gobolka Hiiraan oo saameysay gaadiidka xamuulka – AfmoNews
Wararka ka imaanaya Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in gaadiid fara-badan oo kuwa xamuulka ah, ay maanta ku xaniban yihiin inta u dhaxeyso Degmooyinka Beledweyne iyo Matabaan.
Tani ayaa ka dambeysay markii saakay nin darawal ahaa lagu dilay deegaanka Riigga Ceel-habreed, xilli uu ka yimid Magaalada Berbera, kuna sii jeeday Beledweyne.
Ninka darawalka ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Khadar Xakiin, sida uu sheegay Afhayeenka Maamulka Gobolka Hiiraan, Cabdi Muumin Cilmi.
“Maxamed Khadar Xakiin, Allaha u naxariisto saakay ayaa la ii sheegay in la dilay, waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah, qabiil aanan aqoon, ahaana darawal.” Ayuu yiri Afhayeenka Gobolka Hiiraan.
Dilka ninka darawalka ayaa waxaa lala xiririnayaa aanooyinka xaga beelaha, oo muddooyinkii ugu dambeysay ku soo badanayay gobolkaasi.
“Maamulka Gobolka Hiiraan aad ayuu uga xunyahay falalka noocaasi ah, wuxuuna ku baaqayaa in laga waantoobo arimaha noocaas ah, loona diyaargaroobo wadahadal iyo dib u heshiisiin dhab ah.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii dhalinyaro ka soo jeedda Guriceel oo ku sii jeeday Magaalada Muqdisho, lagala degay gaadiidkii ay ku safrayeen, xilli ay marayeen duleedka Beledweyne, inkastoo wadahadalo ka dib lagu guuleystay in dib xorriyadooda loo siiyo.
Tanina waxay daba socotaa xiisadda beelaha ee muddooyinkii ugu dambeysay ku soo korortay inta u dhaxeyso Beledweyne iyo Matabaan.